कोरोनामुक्त भएका व्यक्तिसँग कति दिनपछि घुलमिल गर्न मिल्छ? - NA MediaNA Mediaकोरोनामुक्त भएका व्यक्तिसँग कति दिनपछि घुलमिल गर्न मिल्छ? - NA Media
कोरोनामुक्त भएका व्यक्तिसँग कति दिनपछि घुलमिल गर्न मिल्छ?
कोभिड संक्रमितबाट अन्य व्यक्तिमा भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भन्नकै लागि बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिने हो । सामान्य लक्षण देखिएका वा कुनै पनि लक्षण नदेखिएका संक्रमित बढीमा १४ दिनमा अन्य व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुन सक्छन् । बिस्तारै शरीरमा भएको भाइरस निष्क्रिय हुँदै जाने भएकाले अन्य व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना हुँदैन । तर, संक्रमितले भने केही समय आराम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या डेढ लाख नाघिसकेको छ । पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या दिनहुँ हजार नाघिरहेको छ । यस्तै, होम आइसोलेसनमा बस्नेहरूको संख्या पनि अत्यधिक भएकाले संक्रमितको हेरचार र सावधानीमा विशेष ख्याल गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
कोभिड पोजेटिभ भएर कुनै पनि लक्षण नदेखिएका संक्रमित तुलनात्मक रूपमा छोटो समयमै निको हुने गर्छन्, तर दीर्घरोग वा अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएका व्यक्तिमा भने संक्रमण निको हुन महिनौँसमेत लाग्ने गरेको पाइन्छ । यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमितसँग संक्रमण पुष्टि भएको कति समयपछि अन्य मानिससँग घुलमिल गर्न मिल्ने भन्ने विषयमा अझै पनि अन्योल नै रहेको पाइन्छ ।
अमेरिकी रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (सिडिसी)का अनुसार कोभिड संक्रमण निको हुने समय व्यक्तिको स्वास्थ्य अवस्थामा निर्भर रहन्छ । जस्तै, स्वस्थ व्यक्ति दीर्घरोगीको तुलनामा कम समयमै निको हुने गर्छन् । भेरी अस्पतालमा कार्यरत डा.संकेत रिसालका अनुसार सामान्य लक्षण देखिएका कोरोना संक्रमित करिब १४ दिनको आइसोलेसन बसाइपछि सामान्य जीवनशैलीमा फर्किन सक्छन् ।
उनी भन्छन्, कोभिड संक्रमितबाट अन्य व्यक्तिमा भाइरस संक्रमण नफैलियोस् भन्नकै लागि बिरामीलाई आइसोलेसनमा राखिने हो । सुरक्षित रूपमा घरमै वा अस्पतालमा आइसोलेसनमा बस्न सकिन्छ । सामान्य लक्षण देखिएका वा कुनै पनि लक्षण नदेखिएका संक्रमित बढीमा १४ दिनमा अन्य व्यक्तिहरूसँग घुलमिल हुन सक्छन् । बिस्तारै शरीरमा भएको भाइरस निष्क्रिय हुँदै जाने हुँदा अन्य व्यक्तिमा सर्ने सम्भावना हुँदैन । तर, संक्रमितले भने कही समय आराम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
सिडिसीले संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा विभिन्न मापदण्ड बनाएको छ । जस्तै, संक्रमण पुष्टि भएर पनि कुनै लक्षण नदेखिएमा संक्रमितले जम्मा १० दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्न सक्छन् । कम्तीमा १० दिनसम्म सावधानी अपनाएर आइसोलेसनमा बस्दा कुनै लक्षण नदेखिएमा सामाजिक रूपमा घुलमिल हुन सक्छन् । तर, कतिपय व्यक्तिमा लक्षणहरू बिस्तारै देखिने हुँदा लक्षणबारे सचेत हुन आवश्यक हुन्छ ।
यस्तै, संक्रमणका कारण गम्भीर बिरामी परेका र लामो समयसम्म लक्षण देखिएका संक्रमितले भने लक्षण देखिएको २० दिनसम्म वा लक्षण निको नहुँदासम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । गम्भीर लक्षण देखिएका अधिकांशमा अन्य समस्या देखिने र निको भइसकेपछि पनि थकान वा कमजोरीपन देखिने हुँदा केही समय आराम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूले समेत कम्तीमा १४ दिनसम्म आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय अवस्थामा ढिला लक्षण देखिने हुँदा संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिले सुरक्षित रूपमा होम आइसोलेसनमा बस्न सक्छन् ।
पछिल्लो समय कोरोना लक्षणहरू थपिँदै गएको र अस्पताल भर्ना भएका बिरामीलाई पनि निको हुन लामो समय लाग्न थालेका कारण संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था र चिकित्सकको सल्लाहअनुसार संक्रमण निको भएका व्यक्तिसँग घुलमिल गर्न सकिन्छ ।